कमलाले नया उपचार विधि रहेको दावी गरिन् , जसले कुष्टरोग समेत निको पार्छ !::mirmireonline.com
कमलाले नया उपचार विधि रहेको दावी गरिन् , जसले कुष्टरोग समेत निको पार्छ !
काठमाडौँ ,२१ पुस । प्राकृति उपचार पद्धन्तिबाट विभिन्न रोगीको उपचार गर्दै आएकी कमला राईले आफूलाई सरकारले ठाउँ उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी छन् ।
आफ्नै वरपर भएका जडीबुडी र अन्य विधिबाट उपचार सम्भव भएपनि राज्यले त्यसलाई बेवास्ता गरेका कारण विरामीले सेवा नपाएको राईले बताएकी छन् ।
‘मैले एचआईभी र कुष्ठरोगबाहेक सबै रोगको उपचार गर्न सक्छु, त्यसको लागि राज्यले वातावरण बनाइदिनु पर्छ । धेरै नेपाली बिरामीको नाममा ठूलो खर्च भइरहेको छ । राज्य पनि उपचार खर्च दिएर हैरान भइसकेको छ’ राईले भनिन् । आफूलाई उपचार गर्ने वातावरण बनाइदिए राज्यको ढुकुटी समेत बच्ने उनको दाबी छ ।